सामग्री वितरण - 2019 NAB देखाउनुहोस् समाचार प्रसारण बिट द्वारा। NAB देखाउनुहोस्, NAB देखाउनुहोस् लाइव को निर्माता को आधिकारिक प्रसारक
घर » सामग्री वितरण
30,000 खुट्टा माथि र 2200 माइल 2017 #NABShow गर्न
... र हामी दूर जान्छौं! हाम्रो फोर्ट लाउडरडेल चालक अब हवामा 30 हजार फिट छ र हामी "सिन्क सिटी" - लास वेगास, नेभाडा हाम्रो बाटोमा हुनुहुन्छ! NAB हामी यहाँ देख्नुहुन्छ! सामान्य रूपमा, मेरो स्तर उत्तेजनाले मलाई बसोबास गर्न दिदैन, त्यसैले मैले उडानमा ब्लगिंग सुरु गरेको छु! (यो खराब बानी छ, तर कम्तीमा म होइन ...
JMR र एक्सल भिडियो फारम साझेदारी NAB 2017 मा इन्जेस्ट-को वितरण कार्यप्रवाह समाधान देखाउन
JMR इलेक्ट्रनिक्स, Inc एक अग्रणी डिजाइन केन्द्र र मापनयोग्य भण्डारण प्रणाली र एक्सल भिडियो, किफायती, भण्डारण-अज्ञेयवाद मिडिया व्यवस्थापन सफ्टवेयर मा नेता, आज घोषणा तिनीहरूले अन्त-को अन्त कार्यप्रवाह समाधान JMR गरेको नवीनतम LightningTM जोड दिंदै प्रदर्शन गरिने को निर्माता मैक Pro® लागि उत्पादन प्रसाद र SHARE® फाइल सर्भर एक्सल 2017, एक्सल भिडियोको पुरस्कार को नवीनतम संस्करण संग एकीकृत ...